Chii chaunofanira kuziva usati wagamuchira katsi | Noti Katsi
Chii chaunofanira kuziva usati wagamuchira katsi
Monica sanchez | | Kugamuchirwa
Kana iwe uchifunga kutora katsi, kungave kubva pekuvanda, kubva mumugwagwa kana kubva kune imwe pamba pamba, zvakakosha kuti iwe uzive kuti pazuva rekutanga, kunyangwe svondo rekutanga, mhuka iri kuzonzwa kusagadzikana.
Kuti ikubatsire kuchinjika nekukurumidza sezvazvinogona, ini ndinokuudza chii chekuziva usati wagamuchira katsi.
1 Viga zvinhu zvine njodzi
2 Ipa nzvimbo yakachengeteka
3 Usamumanikidza kune chero chinhu
4 Shandisa nguva yakawanda sezvaunogona naye
5 Mutore kuenda kun'anga
Viga zvinhu zvine njodzi
Usati waendesa furry kumba zvichave zvakanyanya kudikanwa izvo ita shuwa kuti wavanza zvese zvingamukuvadza: tambo, zvinhu zvinorema uye / kana zvinhu zvinogona kudonhedzwa nekutyorwa, mabhora madiki kana mapini (kana chero chinhu chingamedzwa) uye zvinomera zvine chepfu.
Ipa nzvimbo yakachengeteka
Katsi senge kukwanisa kuenda kuimba yekuva wega. Mariri panofanira kunge paine mubhedha, a scraper, chinwiwa uye chinodyisa, uye, kuita kuti shanduko ive nyore, iwe unogona zvakare kuisa litter tray, uye a atorwa bhokisi (uchaida). Nenzira iyi, nhengo nyowani yemhuri inozokurumidza kuona kuti vapedzisira vave mumusha wakanaka 🙂.
Usamumanikidza kune chero chinhu
Kubva pazuva rekutanga zvakajairika kuti iwe unoda kumubata uye kumutora mumaoko ako, asi iwe unofanirwa kufunga kuti zvisati zvaitika anoda kukuvimba. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kwazvo kumupa anobata uye kutamba naye zvakawanda kuitira kuti hukama hwako hutange netsoka yekurudyi.
Shandisa nguva yakawanda sezvaunogona naye
Iyo katsi inogona kupedza maawa mashoma iri yoga, asi kana iwe usipo kwemaawa mazhinji uye kunyangwe kana uri kumba haugovane nguva yako yemahara naye, hazvitore nguva kuti uve kuora mwoyo. Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe uchengete iye kambani, kureva kuti, iwe unomupuruzira, kuti unotamba nekatsi, kuti unomurega rara newe. Ipapo chete ndipo paanozokuona seizvo iwe zvawakasarudza kuve iwe pawakamuita iye: mhuri yake.
Mutore kuenda kun'anga
Kunyangwe iri mhuka inowanzo kuve noutano hwakanaka kwazvo, chokwadi ndechekuti ichiri chipenyu semumwe wedu. Muhupenyu hwake hwese inogona kuve nezvirwere, kutsemuka, uye mamwe matambudziko anozoda kugadziriswa nachiremba. Uye zvakare, zvakakosha kuti iwe utore iyo kuisa iyo majekiseni anodiwa, the microchip uye, zvakare, ye neutering kana kumurasa kuitira kudzivirira marara asingadiwe.
Tinovimba matipi aya anobatsira kwauri 🙂.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Chii chaunofanira kuziva usati wagamuchira katsi
Sei katsi yangu ichidya jecha
Kuchengetwa kwekati kwakatangira kupi?